Tenga Premium CBD poda & mafuta zviri pamutemo gadzira fekitori
CBD yawana traction munguva pfupi yapfuura, kunyanya pakati pevechidiki huwandu. Vanenge makumi maviri muzana yevanhu vari pakati pemakore gumi nemasere nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vanoshandisa imwe nzira yeCBD, nepo zvikamu zvisere chete zvevanhu vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu vachishandisa CBD. Vanhu vepakati-makore vatangawo kubata vanhu vadiki uye vangangoita makumi matatu muzana vezera iri vanodya muCDD yekushandisa, kungave mumafuta, hupfu, kana fomu rekupfapfaidza.
Chemotherapy ndiyo inonyanya kurapwa kurapwa kweanenge ese marudzi ekenza asi haina kunyatsoshivirirwa nemuviri wemunhu uye inogona kutora mutero pahunhu hwehutano. Imwe yemhedzisiro mhedzisiro inowanikwa mune vese varwere vari kurapwa chemotherapy ndeye chemotherapy-inokonzeresa svoto uye kurutsa kana CINV. Kunyangwe akati wandei antiemetic mishonga iripo, mimwe yacho yakanangana neCINV, haisi kugara ichishanda. Zvisinei, kutsvagurudzwa kwakaitwa muBarcelona kwakawana kuti kunwa kweCBD kunogona kubatsira kurerutsa varwere vanotambura neCINV nehunyanzvi hwekuita kupfuura mishonga yema antiemetic yakagadzirirwa CINV.
AASraw inogadzira poda yeCDD uye inogadzirawo CBD oiri, zvese zviri zviviri zvinozivikanwa kwazvo uye zvakanyanya kudiwa. Zvigadzirwa zvakagadzirwa neAASraw zvinosanganisira: